Thursday April 19, 2018 - 21:57:49 in Wararka by Super Admin
R/wasaaraha cusub ee dowladda Xabashida Itoobiya ayaa isbedel ballaaran ku sameeyay golaha Wasiirrada wadankaasi tan iyo markii uu xilka dhowaan la wareegay.
Abeey Axmed ayaa Warsaxaafadeed uu kasoo saaray magaalada Addis Ababa wuxuu kusoo magacaabay gole wasiirro oo ka kooban 16 wasiir iyo wasiirro ku xigeenno.
Wasiirro caan ah ayaa xilalkii ah hayeen kuwaayay isbedelkan cusub waxaana kamid ah wasiirkii difaaca ninka lagu magacaabo Siraj Farissa iyo wasiirradii beeraha iyo xanaanada iyo daaqa balse wasiirka arrimaha dibadda ayaa jagadiisa loo dhaafay.
Siraj Farissa Wasiirkii hore ee difaaca ayaa ahaa shakhsi awood ku leh waddanka wuxuuna si KMG ah Itoobiya umaamulayay tan iyo markii uu iscasilay R/wasaarihii hore islamarkaana wadanka lagusoo rogay xaalad degdeg ah.
Dhinaca kale Baarlamaanka Itoobiya ayaa guddoomiye udoortay haween kasoo jeeddo mid kamida qowmiyadaha muslimiinta, muferiat Kaamil oo katirsan Xisbiga talada haya ayaa hoggaamin doonto Baarlamaanka Federaaliga ah ee magaalada Addis Ababa.
Haweeneydan waxay kasoo jeeddaa gobolka Shacabka Koonfurta waxayna muddo sanada ah xubin Firfircoon ka aheyd Xisbiga wadanka maamula ee lagu magacaabo EPRDF.
Bishii lasoo dhaafay ayaa R/wasaaraha Itoobiya loo magacaabo Nin kasoo jeedo Qowmiyadda Muslimiinta Oromada balse Hooyadiis ay tahay Kirishtaan.